आज कार्तिक २६ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य ! - VOICE OF NEPAL
Tuesday January 26, 2021 |
आज कार्तिक २६ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य !
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:३८
मेष – मिठो भोजन मिल्नेछ । भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सुख सम्पति मान महत्त्वमा बढोत्तरी होला । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । आरोग्यता बढ्ला । यश ख्याति फैलिनेछ । मांगलिक कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
बृष – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । शारीरिक रआर्थिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । सुख आनन्द प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – यात्रामा सफलता मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी बढ्ला । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कार्यव्यापारमा प्रगति होला । प्रेमपात्रसित मिलन हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम पनि बन्नेछ । इष्टमित्र सन्तान आदिका साथ पाउनुहुनेछ । पारिवारिक कलह शान्त हुनेछ । मान महत्त्व बढ्नेछ । गीत–संगीतमा आकर्षण बढ्नेछ ।
कर्कट – आयस्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ । मान महत्व बढ्ला । भोज भत्तेरमा भाग लिनुहुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । देखापरेको समस्याको समाधान खोज्नुहुनेछ । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय र ठुलो रकमको लगानीप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
सिंह – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । हाकिमको साथ मिल्नेछ । कर्ममा रुचि बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । खेलकूदमा भाग लिनुहुनेछ । यात्रा गर्नुहुनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख सम्पदा बढ्ला । आरोग्यता वृद्धि होला । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्व बढ्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक र कलात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति बढ्नुको साथै कार्यमा सफलतमा मिल्नेछ ।
कन्या – समस्याको समाधान मिल्नेछ । शुभ काममा प्रवृत्ति बढ्ला । मान महत्व बढ्ला । भ्रमण बढ्नेछ । विवाद आदिमा नपर्नु उचित रहला । अरुको भरभन्दा आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्नेछ ।
तुला – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु बेस होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार होला । आयमा वृद्धि हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । कार्यव्यपारमा सफलता प्राप्त होला । योजना र बजेट बनाई काम गर्नु हितकर हुनेछ । धन सम्पदामा बढोत्तरी हुनेछ ।
वृश्चिक – धन सम्पति बढ्ला । साहसिक काम बन्नेछ । मान महत्व बर्चश्व बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । सुख आनन्द बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु किन्नुहुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य बेस होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमतामा वृद्धि होला ।
धनु – सुख-सफलता बढ्नेछ । अन्नधनमा वृद्धि हुनुको साथै आयस्रोतमा पनि बढोत्तरी होला । रोकिएको काम बन्नुसँगै उधारो लगाइएको धन पनि उठ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । गीतसंगीत र रसरागात्मक काममा आकर्षण बढ्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । सन्तान सुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । नियमकानूनले साथ दिनेछ । भएको दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित नहोला । योजना र बजेटमा बल बढ्नेछ । राजकीय काम गर्नु बेस रहला । आयस्रोत बढ्ला ।
कुम्भ – कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र आर्थिक विकाससित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य पनि बन्नेछ । नयाँ आयस्रोतवर्द्धक काममा सफलता पाउनुसँगै इष्टमित्र र सन्तानको सुख मिल्नेछ । लगानी उठ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । आरोग्यता र ऐश्वर्य वृद्धि होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला ।
मीन – आफन्तको साथ मिल्नेछ । लेखन तथा प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला । मिठो भोजन मिल्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । सुख सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् । सुख विलास पनि बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्ला । जोखिममा नपर्नु नै बेस होला ।
महाभारतमा भीमले कसरी पाए हजार हात्तीको बल ?
गरीबी हटाउन श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई यस्तो उपाय दिएका थिए !
श्रीमद् भागवत गीताका यी अनमोल वचन
आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २७ गते सोमवार (जनवरी ११ तारिख) || यहाँकाे दिन शुभ रहाेस् !
शास्त्र भन्छ : शनिबार भुलेर पनि यी काम गर्नुहुदैन !
वेदमा के छ ? चार वेदको रहस्य !
वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०४ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर १९ तारिखको राशिफल।
वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०३ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर १८ तारिख- तपाईंको दिन कस्तो रहला ? यसो भन्छ राशिफल !
बि.स.२०७७ साल कार्तिक २८ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर १३ तारीखको राशिफल हेर्नुहोस् !
मास्क नलगाई खाना डेलिभरी गर्ने ‘ उबर इट्स ‘ कामदारलाई ठाउँको ठाउँ २०० युरो जरिवाना !
बालुवाटारअगाडि नागरिक आन्दोलनमा व्यापक लाठीचार्ज, केही प्रदर्शनकारी घाइते
पोर्चुगलका रक्षामन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण।
पोर्चुगलमा कोरोना : अलमदाको गार्सिया दे ओर्ता अस्पताल बेड क्षमताको ३५० प्रतिशत बढी कोरोनाका बिरामीले भरियो !
पोर्चुगलको राष्ट्रपतिमा मर्सेलो निर्वाचित
कोरोना कहरका बीच पोर्चुगलमा आज राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुदै, नेपालीहरुले पनि गरे मतदान !
कोरोनाका कारण SEF को कल सेन्टर आजदेखि बन्द, अनलाइन र इमेल मार्फत सेवा दिईने !
लिस्बन मेट्रोमा हरेक यात्रुलाई जाँच गर्दै प्रहरी, बिनाकाम हिड्ने र कामको प्रमाणीकरण पत्र नहुनेलाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना !
हिरासतमा मृत्यु भएका आप्रवासीको परिवारलाई सेफद्वारा ७ लाख १२ हजार ९५० युरो क्षतिपूर्ति प्रदान !
पोर्चुगलमा पछाडीको ढोकाबाट लुकिछिपी कफी बेच्ने व्यवसायी सहित १२ जना ग्राहक पक्राउ : क्याफे मालिकलाई १० हजार र ग्राहकलाई जनही २०० युरो जरिवाना !